Xog sir ah: King Ck oo arin farxad ah shaaciyay iyo isha caziiz oo farxad darteed la ilmeysay. - xog baahiye
king ck ayaa habeen hore live kasoogalay bartiisa Instagram halkaas oo kusoo bandhigtay jaceyl waxuuna usheegtay gabadha lagu magacaabo isha aziiz. Hasayeeshe isha caziiz oo arinkan lama filaan kunoqday ayaa ladhacday farxad iyo qosol.
Ilo xog ogaal ah oo lagu kalsoonaan karo ayaa shaaciyay in isha caziiz ay aad usoo dhaweysay jaceylka kaga yimid dhanka king ck. King ck ayaa asagana dhankiinsa kadhawaajiyay in uu isha caziiz kadoonayo in ay noqoto xaaskiisa rasmiga ee uu kufaano.
AKHRISO: Fadeexo: Daawo Najmo Nashaad oo baalasha ka riftay ismaacil Aarka iyo dayax dalnuurshe .
Qaraabada iyo dadka ka agdhow king ck ayaa shaaciyaya arin farxad leh oo bilaawaga noolasha cusub ee king ck iyo isha caziiz kusaabsan waxey sheegeen in isla sanadkan gudihiisa ay dhigan doonaan aroos aad ubalaaran.
Dhanka kle youtubee somalida ah ee soo gudbiyo xogaha dadka caanka ka aha baraha bulsha ee ay somalida kamid tahy ayaa ufasiray arooskan in loogu dan leeyahay in looga maseersiiyo manaal beeldajiye